बिध्योदय निमाबि को अभियान | Wakhet Diary
बिध्योदय निमाबि को अभियान
Posted on March 5, 2013 by Wakhet Diary
गत बर्ष बिध्योदय निमाबि वाखेत ले ” डोको अभियान” गरेको थियो।
यो पनि पुस्तकालय कै अभियान थियो। हाम्रा टिचर, स्टुडेन्टहरु डोको बोकेर घर घर मा नयाँ तथा पुराना पुस्तक माग्दै पुगेका थिए। वर पर मात्रै पुगेका उनिहरुले ८० थान पुस्तक जम्मा गरेका थिए। तर यो यति उदाहरणीय काम बन्यो कि अहिले लगभग अरु गाउँका स्कुलहरुले डोको अभियान गरेर हामीले भन्दा धेरै पुस्तक सँकलन गरि सके।
यस बाट के बुझिन्छ भने वाखेत स्कुल सामुदायमा जागरण फैलाउन सफल छ। यति मात्रै होईन वाखेत स्कुले “चिनो” पुँजी खर्च नहुने ब्याज मात्रै स्कुलले दिर्धकाल सम्म उपयोग गर्ने कोष २०१० मा बनाउन सुरु गर्यो अहिले यसै को अनुसरण छिमेकी गाउँहरुमा पनि भै रहेको छ।
भैल वाखेत स्कुल कति सफल छ कति असफल छ त्यो अहिल्यै नै मुल्याँकन गर्ने बेला भै सकेको छैन। किन कि २०१० बाट सुरु भएर २०१३ सम्म पुग्दा ५ कलास बाट ८ कलास सम्म पुराएको छ।
यस्को गुणस्तर र स्थिरता ले आफै बताउने छ।
यो बर्ष “पुस्तकालय भ्रमण बर्ष- २०१३” मनाएको छ। यसको असर पनि छिटै देखिने छ। यस्ले वाखेत ले मात्रै होईन सोझै अरु ठाउँ को पुस्कालयले पनि आफुलाई अपडेट राख्ने छन। सँस्कार, सन्चार, समाज तव मात्र पछि पर्छ जस्ले आफुलाई अपडेट गर्दैनन। सबै पुस्तकालयले आफुलाई अपडेट गरे भने यस्को उपलब्धी हरेक समाज मा पुग्ने छ। कुनै पनि कुरा एकै चोटी हुदैन। यस्को सुरुवाट हुनु पर्छ बिस्तारै पुरा हुन्छ हो त्यही काम हाम्रो स्कुलले गरेको छ।
यसै बर्ष देखि सुरु गर्ने भनिएको ब्यबसायिक जागरण का २ चरणहरु
Exe. Generation- सरो सहकारी & गाउलेहरुले हरेकले कम्तीमा एउटा गह्रा बेसार खेती को लागी सामुदायलाई हामीले कत्तिको तैयार गर्न सक्छौ या सक्दैनौ त्यो सामुदाय को अग्रसरता मा नै भर पर्दछ। किन कि हामी ब्यबसायिक खेती संस्कार मा पसेकै छेनौ।
तर पनि हामीले गाउँले मा जागरण लाउने काम स्कुल बाटै सुरु गर्ने छौ। Exe.Generation ले सबैलाई समेट्ने भन्दा सोच राख्दा राख्दै पनि हामीले युवा- र बिधार्थी जो महिना को १००० रुपैया बचत गर्न सक्दैनन उनिहरुलाई छुटाएको छौ। उनिहरु पनि यो ब्यबसायिक खेती मार्फत उत्पादन मा लाग्ने छन। २०० परिवार रहेको गाउँ मा एकै चोटी बेसार को बिउ किनेर निशुल्क दिनु पनि त्यो अहिले को स्थितिमा सम्भव छैन किन कि एक त सबैलाई लौ बेसार लगाउ भनेर मनाउन गाह्रो छ अर्को बिउ किन्ने पैसा नै छैन र बिउ आउने स्रोत पनि छैन। तर हामीले कम्ति मा स्कुल ले केहि बर्षको लागी निशुल्क उपयोग गर्ने जग्गा या थोरै लिज मा जमिन खोजि रहेको छ। त्यसै मा बेसार र अदुवा को बिउ अर्को बर्षको लागी बनाउने हो भने हामीले छिटै वाखेत लाई बेसार को बिउ बितरण गर्ने सक्ने हैसियत मा पुग्छौ। सबैले बेसार लगाए भने हामी हामी बेसार मा आत्मनिर्भर मात्रै होईन बेसार बिक्री गर्न एउटा ब्राण्ड बनाउन पनि सक्छौ।
त्यो दिन कस्तो होला ? “बेसार” त वाखेत कै राम्रो – एफएम ले यस्तै बिज्ञापन बजाउला सम्भव त यति नै ठुलो स्केल मा ब्राण्ड नै बनाउन नसके पनि कम्तीमा हाम्रो उत्पादन चुपचाप थुप्रै भान्साहरुमा त पुग्ने छ।
जव सम्म Exe.Generation सँस्था को कुरा छ यसको ५ जागरण अभियान मध्ये कै
शिक्षा जागरण ( वाखेत को आफ्नै +2)
आर्थिक जागरण ( सरो सहकारी )
ब्यबसायिक जागरण ( आफ्नै ब्राण्ड)
प्रतिभा जागरण ( ब्याण्ड,खेलकुद,साहित्य)
भौतिक,प्रकृति,साँस्कृतिक जागरण ( बाटोहरुमा आरुपखडा, जँगलका सिमाना (धुरी र पर्खालको वरिपरि धुपी)
सबै को लागी आवश्यक भनेको एकता हो त्यहि एकता ले नै वाखेतलाई बलियो बनाउछ। यो ५ बर्षे जागरण अभियान को पहिलो चरण हो भने वाखेत मुस्किलले तेस्रो बर्षमा दोस्रो फेजमा पुगेको छ। तर यो Exe.Generation -सरो सहकारीलाई सफल बनाउन सक्यौ भने वाखेत ले काँचुली फेर्ने छ। स्वस्फुर्त रुपमै ब्यसायिक ,प्रतिभा, भौतिक जागरण पनि सफल हुने छ।
“हाम्रो वाखेत, राम्रो वाखेत” (Unity for better wakhet)
This entry was posted in 1.वाखेत डायरी, 2.बिध्योदय निमाबि वाखेत by Wakhet Diary. Bookmark the permalink.